सेल्फ डिफेन्समा बोल्न र ठोक्न सिकाउँछौः सुरेन्द्रसिंह विष्ट, प्रमुख प्रशिक्षक |
सेल्फ डिफेन्समा बोल्न र ठोक्न सिकाउँछौः सुरेन्द्रसिंह विष्ट, प्रमुख प्रशिक्षक
प्रकाशित मिति :2018-11-12 16:24:10
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक ४ जना महिला, बालिका यौन हिंसा/बलात्कारमा पर्ने गरेका छन् । बढ्दै गएको यौन हिंसाबाट बच्न महिलाहरूमा आत्मरक्षाको सीप बढाउन जरुरी छ । तर, यस्ता हिंसाबाट बच्न महिला स्वयं कसरी बलियो हुने वा आफूमा आत्मबल कसरी बढाउने ? यीनै कुरा देशव्यापी रुपमा आत्मरक्षा तालिम मार्फत सिकाइरहेका कुरोदय सेल्फ डिफेन्स मार्सल आर्ट एशोसियसनका महासचिव तथा प्रमुख प्रशिक्षक सुरेन्द्रसिंह विष्टसँग महिला खबरका लागि प्रतिमा सिलवालले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेपः–
प्रमुख प्रशिक्षक, सुरेन्द्रसिंह विष्ट
– तपाईंले देशव्यापी रुपमा महिलाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइरहनुभएको छ । यसको उद्देश्य के हो ?
नेपालमा पछिल्लो समय हत्या हिंसा तथा बलात्कार बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुरोदय सेल्फ डिफेन्स मार्सल आर्टबाट हामीले चार/पाँच वर्षयता आत्मरक्षा तालिम दिँदै आएका छौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा चाहिँ २ वर्षयता दर्ता भएर काम गरिरहेको छ । हामी कुनै पनि मार्सल आर्ट तथा तालिममा भाग नलिएका, खेलमा सहभागी नभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफूले जन्मजात पाएको शारीरिक, मानसिक तन्दुरुस्तीलाई नै अख्तियार गरेर कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने दिन्छौं ।
यसको वास्तविकता ‘लेस पावर, लेस मोसन र लेस कन्ट्याक्ट’ छ । जुन हाम्रो बायो मेकानिजम् प्रोसेस हो । हामी नजन्मिदै सेल्फ डिफेन्सको पोजिसनमा हुन्छौं । जब जन्मिन्छौ अनि दुब्लो मान्छे कमजोर हुने, महिला कमजोर हुने अथवा कुनै समुदायको व्यक्ति कमजोर हुने भन्ने किसिमको धारणा छ ।
मलाई त के लाग्छ भने आफू परिवर्तन हुनको लागि आफ्नो आत्मविश्वास आफैले बढाउने हो । आफ्नो क्षमता आफैले बढाउने हो । यसमा पनि आफूभित्र भएको प्रतिभा अझ भनौं आत्मविश्वास बढाउनको लागि कुरोदय सेल्फ डिफेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
– मानिस गर्भमा रहँदा नै डिफेसिन्भ पोजिसनमा हुन्छ । समाजले निर्धारण गरिदिएको भूमिकाले उनीहरूलाई कमजोर बनाउने हो । तपाईंहरूले यही भूमिकामा पनि तिमी बलियो छौं भनेर कसरी सिकाउनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त महिलाहरूमा प्रतिकार गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । जसबाट अहिले भइरहेको हत्या, बलात्कार तथा हिंसा घटाउन सकिन्छ । त्यसैलाई अख्तियार गर्दै पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट राष्ट्रपति महिला खेलकुद अभिबृद्धि कार्यक्रम मार्फत खेलकुदमा महिलालाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर तालिम दिइरहेका छौं । यसको धारणा खेलकुदमा महिला सहभागी भए उनीहरूमा आफ्नो शरीरको रक्षा आफै गर्न सक्ने आत्मविश्वास पलाउँछ र सक्छन् पनि भन्ने हो ।
त्यतिमात्रै होइन खेल क्षेत्रमा समय दिने महिला दिदीबहिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको नाम पनि चिनाउन सक्छन् । अहिले हामीले ३५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तर्फबाट तालिम पनि दिइसकेका छौं । र व्यक्तिगत रुपमा पनि हामीले तालिम दिइरहेका छौं ।
यसको अर्को फाइदा के हो भने महिलाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइसकेपछि उनीहरूमा मसँग आफूलाई जोगाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जागृत हुन्छ । हामी तीन दिन वा एक हप्ताको तालिम दिन्छौं । यो तालिम लिएका महिलाले कुनै व्यक्तिले हिंसा, आक्रमण गर्न खोज्छ भने प्रतिकार गर्न सक्छन् । यो मेरो दाबी हो ।
– हामी आत्मरक्षा भन्नेबित्तिकै शारीरिक रुपमा बलियो हुनुपर्ने भन्ने बुझ्छौं । तपाईंहरू चाहिँ शारीरिक रुपमा मात्रै तालिम दिनुहुन्छ कि मानसिक रुपमा पनि बलियो बनाउन केही सिकाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा सबै मान्छेसँग गर्भभित्र रहँदाको वास्तविकता एउटै हुने रहेछ । हामीले भन्दा प्रतिकार गर्ने पोजिसन भन्छौं । त्यहाँ महिला वा पुरुषको बलियोपना फरक रहँदैन, देखिँदैन । त्यो बल महिला वा पुरुष दुबैमा जन्मिएपछि पनि हुन्छ । तर, सबैले आफूभित्र भएको बलियोपना चिन्न सक्दैनन् । त्यसको लागि उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाइदिन जरुरी हुन्छ । हामी तालिम मार्फत उनीहरूलाई पहिला मानसिक रुपमा बलियो बनाउँछौं । आफूभित्रको क्षमता चिन्न प्रोत्साहित गर्छौं । त्यसपछि मात्रै हामीले उनीहरूलाई शारीरिक रुपमा गर्ने आत्मरक्षाका तरिका सिकाउने हो । हामीले उभित्र रहेको कला बाहिर निकाल्न मात्रै सिकाउने हो । त्यसैले हामी यो तालिम दिँदा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै तालिम सिकाउँछौं । जसबाट उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ ।
– महिलालाई त तिमी कमजोर छैंनौ भनेर सिकाउनुहुन्छ । हामीले सर्सती हेर्दा महिला जोखिममा पर्ने अधिकांश पुरुषबाटै हो । पुरुषहरूलाई पनि तिमीहरूले हिंसा नगर है भन्ने खालका कक्षहरू वा तालिम दिनुभएको छ ?
हामीले विभिन्न ठाउँमा तालिम दिएका छौं । तालिमका क्रममा महिला दिदीबहिनीहरूबाट केही पृष्ठपोषण पनि पाएका छौं । उहाँहरूले आफ्नो घरभित्रका दिदीबहिनीलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने र घर बाहिरका दिदीबहिनीलाई चाहिँ जस्तो व्यवहार गरे पनि हुने भन्ने खालको धेरै पुरुषहरूमा गलत सोच हुन्छ भन्नुभएको छ । यस्तो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले हामीले तालिममा जाँदा पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि महिलामाथि हिंसा, भय त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ भने देशमा यस्तो कानून छ र तपाईंहरूलाई कानूनी कारबाही हुनसक्छ भन्ने सिकाउने गरेका छौं ।
– तपाईं आफैले देशका विभिन्न ठाउँमा तालिम दिनुभएको छ । हुर्कँदैदेखि महिला स्वयंलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने बनाउन के गर्नु जरुरी रहेछ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त महिलाको सबैभन्दा ठूलो पाठशाला घर नै रहेछ । घरबाट जस्तो वातावरण दियो, जस्तो शिक्षा सिकाइयो त्यसअनुरुप नै उनीहरूको मनोबल बढ्ने वा घट्ने हो । घरदेखि नै छोरीलाई गलत र राम्रो सिकाएर, मानसिक रुपमा काउन्सेलिङ गरेर स्वतन्त्र वातावरणमा हुर्कन दिनुपर्छ । उसलाई बलियो बनाउन सिकाउने घरबाट नै हो । त्यसपछि सरकारीको जिम्मेवार निकायले उनीहरूलाई मजबुद बनाउने खालको वातावरण निर्माण गर्न पनि नीति तयार गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै बालबालिकालाई बलियो बनाउन मनोबल बढाउने सामग्री राख्ने । उनीहरूलाई जीवनमा आउनसक्ने जोखिमबाट बच्न पहिलो तहको आत्मरक्षा सिकाउने लगायतका विषय विद्यालय शिक्षामा नै समावेश गरिनुपर्छ ।
– तपाईंले दिने तालिम कस्तो र कति प्रकारको हुन्छ ?
मैले अघि पनि भनें, हामीले यसअघि सेल्फ डिफेन्स नसिकेका दिदीबहिनीलाई तालिम दिन्छौं । उहाँहरूलाई बाटोमा हिँड्दा, अफिसमा बस्दा वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा रहँदा हुनसक्ने जोखिमबाट बचाउने हाम्रो उद्देश्य हो । हुनसक्ने हिंसाजन्य क्रियाकलाप रोक्न २२ खालका तरिकाबाट प्रतिरक्षा गर्न हामी सिकाउँछौं । अगाडि वा पछाडि र ३६० डिग्रीबाट गरी २२ तरिकाबाट उनीहरूमा आक्रमण हुन सक्छौं । त्यसलाई लेस पावर, लेस मोसन र लेस कन्ट्याक्टको तरिकाबाट कसरी प्रतिकार गर्न सक्छौं भन्ने हामीले सिकाउने हो । कम्तिमा एक हप्तामा हामीले तालिम दिएका दिदीबहिनीले २२ तरिकाबाट आफूलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आक्रमणको प्रयास सिधै शारीरिक रुपमा हुँदैन । हिंसा शब्दबाट शुरु हुन्छ । हाम्रो तालिमले शब्दबाट सुरु हुने हिंसालाई शब्दबाटै प्रतिकार गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ ।